3d အနုပညာလက်ရာ၊ 3d Metal Art၊ Panel အနုပညာ - လှပသောအိမ်အလှဆင်ခြင်း
7pcs ကြာပန်းပန်းပွင့် handpaint xxl အရွယ်အစားသတ္တုဆီ ...
တောင်ကြီးရှုခင်း 3D ရှုခင်းရွှေသတ္တုရေနံနာကျင်မှု ...
တောက်ပသော ဦး ခေါင်းခွံ 3D သတ္တုအပြာရောင်ရေနံပန်းချီခေတ်သစ် ...
စိတ္တဇ 3D သတ္တုရောစပ်အရောင်ပန်းပုခေတ်သစ် ...
Calla lily 3D သတ္တုပန်းပွင့်ဆီကိုခေတ်မီပန်းချီကားများ ...
ငါးကျောင်း 3D သတ္တုရေနံပန်းချီခေတ်သစ်အိမ် ...
Calla Lily ပန်းပွင့် 3D လက်ဖြင့်ဆီဆေးသုတ်ခြင်းမုဒ် ...
100% လက်သုတ်အစိမ်းရောင်အရွက် 3D သတ္တုရေနံဆေးသုတ် ...
100% လက်သုတ်ရွှေငါး 3D သတ္တုရေနံပန်းချီ ...
၁၀၀% လက်ဆေးသုတ်သောအပြာရောင်ပင်လယ်ပင်လယ် 3D သတ္တုဆီဆေး ...
100% လက်သုတ်ဆေးရောင်စုံအမျိုးသမီး 3D သတ္တုရေနံပန်းချီ ...
၁၀၀% လက်သုတ်ဆေးသုတ်ထားသောအမျိုးသမီး 3D သတ္တုဆီဆေး ...
ခေတ်မီဆန်းပြားသောသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော LED လေဆာရောင်ခြည် ...
စိတ္တဇသတ္တု LED လေဆာရောင်ခြည်ခေတ်သစ်အိမ် ...
ခေတ်မှီဆန်းပြားသောဒီဇိုင်းရှိသောသတ္တုပါသော LED ပန်းချီ ...
နတ်သမီးတစ်ပါး 3D သတ္တု LED ပန်းချီခေတ်သစ်အိမ်က ...
စိတ္တဇ 3D သတ္တု LED ပန်းချီခေတ်ပြိုင် wal ...
အုန်းပင်စက်ဝိုင်း 3D အပြာရောင်သတ္တုရေနံပန်းချီ ...
စက်ဝိုင်း 3D သတ္တုစိတ္တဇပန်းချီကားများအတွက် ...
Koi ငါး 3D စက်ဝိုင်းသတ္တုရေနံပန်းချီအတွက် ...
Yinyang Tai Chi Koi စက်ဝိုင်း 3D သတ္တုရေနံပန်းချီ ...
Inter အတှကျစိတျဝငျစား Circle 3D သတ္တုရေနံပန်းချီ ...
စိတ္တဇ 3D သတ္တုရေနံပန်းချီခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်း ...
စိတ္တဇအပြာ 3D သတ္တုရေနံပန်းချီခေတ်သစ် ...
အတွင်းပိုင်း wal များအတွက် 3D အညိုရောင်စိတ္တဇဆေးပန်းချီ ...
Abatract 3D သတ္တုရေနံအတွင်းပိုင်းပုံစံအတွက် ...
စိတ္တဇပန်းပုရောင် 3D သတ္တုရေနံပန်းချီကား ...
Fairy Tree 3D အပြာရောင်သတ္တုရေနံပန်းချီခေတ်သစ် ...
Fairy Colourful သစ်သား 3D သတ္တုရေနံပန်းချီကား ... Moder ...
Flower Blossom 3D သတ္တုရေနံခေတ်သစ်အတွက်ပန်းချီကား ...
လက်ကားဈေးနှုန်းသတ္တုနံရံအလှဆင် - ဒီဇိုင်းဆန်း 3D ...
Handsome Home Decor သည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 3D သတ္တုအနုပညာကိုအထူးပြုသည့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောတရုတ်ပြည်အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေမြို့ Putian City တွင်တည်ရှိသည်။
Calla lily 3D သတ္တုရေနံပန်းချီ၊ နံရံအလှဆင်ခြင်းအတွက်အထူးနှင့်ထူးခြားသောပုံသဏ္,ာန်၊ သင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကိုထောက်ပံ့သည်။ ဤအပိုင်းအစတွင်ရွှေရောင်တောက်ပသောရွှေရောင်အရောအနှောတစ်ခုပါရှိသည်။
လူအချို့သည်မိမိတို့၏အိမ်ကိုအထူးနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများဖြင့်အလှဆင်လိုကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစက်ဝိုင်း koi metal ပန်းချီကားသည်အလင်းရောင်အတွင်းမှမီးလာသောအခါကြွေကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ မဖွင့်ဘူး ...
ငါတို့ကုမ္ပဏီ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် HANDSOME ARTS ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်မှုပညာအတွက်အထူးပြုလုပ်သည်။ အိမ်၊ ရုံးသုံး၊ နံရံအလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်အလှဆင်ခြင်းပန်းချီ၊ သတ္တုဆေးနှင့်အလူမီနီယမ်ဆေးသုတ်ခြင်း ...
လှပသောအိမ်အလှဆင်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော 3D သတ္တုနံရံဆေးသုတ်လုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုယုံကြည်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောဖန်တီးမှုပန်းချီကားများကသင့်အားကြီးမားသောအောင်မြင်မှုပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။